Allgedo.com » Yaa yiri ISBADAL baa dhacay? Yaa yiri marxalad cusub baa la galay? Yaa yiri murankii Madaxda waa laga gudbay?	Home	About
Home » News » Yaa yiri ISBADAL baa dhacay? Yaa yiri marxalad cusub baa la galay? Yaa yiri murankii Madaxda waa laga gudbay? Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Yaa yiri ISBADAL baa dhacay? Yaa yiri marxalad cusub baa la galay? Yaa yiri murankii Madaxda waa laga gudbay Yaa yiri Profyadan ayaa wax tari kara? Yaa yiri khilaafkii baa dhammaaday? Yaa yiri is qabqabsigii baa idlaaday? Yaa yiri is maandhaafkii baa haray? Yaa yiri waxaa la galay xilligii dib u dhiska dalka iyo dib u deginta dadka? Yaa yiri waxaa la gaaray bisayl siyaasadeed? Yaa yiri AL baa laga xoroobay? Yaa yiri … Yaa yiri… Yaa yiri….
Inaan weydiimahan dhigo inay dani ii sheegtay ka sokow, waxaan is leeyahay durbaankii la garaacay Maalinnimadii Talaadada ee 28-ka bsihii Agoosto, ee la doortay Guddoomiyaha Baarlamaanka mudane Jawaari, 10kii bishii Sebtembre, ee la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo 06-dii bishan lagu jiro ee Oktoobar ee la magaacabay Mudane Saacid, daxashii ka dhalatay iyo mirirkii uu maanka u gaystay kolley kama goyn kartide, armaad ugu yaraan burush Timo yix ka jilicsan marisaa, Suujinadu inaysan qaadmayn ma moogi, balse, waxaan is leeyahay armaysan ka darayn “Cayri caymo ma diiddee!.”
Maskax aan shaqaynayn Miraheeda weeyaan!
Ayaandarrada jirta baa ah, qormadu inay ku soo aadayso iyada oo wali ay socdaan mashxaradaha loo dhigayo kuwan is khilaafsan, waaba iga weydiin, ma mudan yihiin in loo alalaaso? Hadday tahay haa, waa DHILAALKA DHAQANKA wax noogu hagaagi la’yihiin, illeen waxaanba u sacbinnaa wixii dhibkeena ah oo kaliya, haddiise ay maya tahay, maxaa keenay in loo sacbiyo?
Waxaa muran ugub ama curdun ah ka dhex taagan yahay Madaxeyane Xasan Sheekh iyo Wasiirka 1-aad Saacid, waxaa la isku mari la’yahay tirida Golaha Wasiirrada laga dhigayo, Sagaal ama Toban waxaa ku dhaggan Madaxweyne Xasan, oo dabcan loo qiilin karo, balse, aanan anigu wali arag qiil i qanciya ama lala soo shir tagi karo, ugu yaraan Shan iyo Toban ilaa Siddeed iyo Toban waxaa taagan Wasiirka koowaad Saacid, oo ah sida caqligu keenayo.
Inta aanan sii falanqayn, su’aalaha ugu waaweyn waxay yihiin: bil is lama joogine, goorma ayey is khilaafayaan? Miyeysan wax ku heshiin inta aysan dadka u caddayn inay wada shaqayn doonaan?
Gaar ahaan, haddiiba ay ka go’nayd Madaxweyne Xasan inuu tirada Sagaal ama Toban meel marasho saw kuma habboonayn ama ma ahayn inuu inta uusan shaacin magacaabista Saacid shardi ahaan ugu xiro, si uusan caqabad ugala kulmin, anagana noo niyad dilin? Miyeysan ahayan niyad jab xun oo la billowday Xukuumadda Saacid? Su’aashuna noqonaysaa: imisa ayey sii jiri doontaa?
Marka laga soo tago yaa qumman, yaase qaldan? Ma tahay xilli ay murmaan? Ma isla qaateen waqti ay isku qilaafaan? Ma wadaageen aragtiyo kala duwan ee ku aadan:
Sugiddaa ammaanka, Dhismaha hayadaha dhaqaalaha
Is maandhaafka jira iyo Is mari waaga taagani
Hiddihii mudnaa iyo In la mooso Dhaqankii
Maankeena maran iyo Miyirkeena maqan iyo Maskax aan shaqaynayn
Maamul aan hoggaan qabin Majarahii hagaayiyo Marjicuu u laabtaa Maankeena maran iyo Miyirkeena maqan iyo Maskax aan shaqaynayn Miraheeda weeyaan!
Dhanka kale, haddii wax lagu murmo ay jiraan waxaan dhihi lahaa waa dhaarin la’aanta Guddoonka Baarlamaanka, ee uu ugu horreeyo Mudane Jawaari, taa uu ka hadlay Guddoomiyaha Maxkamadda sare Avvocato Caydiid Ilka Xanaf isagoona waliba ka cawday arrintaa oo yiri:
“Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo waliba ku Xigeennadiisa ayaga ayaanba ahayn Sharci! Sababtoo ah ma dhaarin, sidaa darted, waxay ku joogaan Sharci daro!”.
Maarayn xumaataa Mashaqiyo abaar iyo Mawd wadara kaba daran!